JAARSUMMAA KANAAF FALA FIDAA?- Beknaan Rabbirraa’tiin – Beekan Guluma Erena
JAARSUMMAA KANAAF FALA FIDAA?- Beknaan Rabbirraa’tiin	Beekan Guluma Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE May 14, 2016May 14, 2016OROMO
JAARSUMMAA KANAAF FALA FIDAA?-
Abbaa manaaf haadha manaatu dhiiyeenya kana Wal fuudhe. Gaafa tokko osoma wajjiin karaa deemaa bashannanaa jiran, sareen guddaan tokko ganda namaatii fiigaa isaanitti dhufe. Sarichi akka qilleensaa arreedee dutaa isaan nyaachuuf ykn ciniinuuf itti fiige. Isaan gamaaf gamana ilaalanii Saricha waan ofirraa ittisaniin dhabanii harka duwwaa hafarsaa itti iyyan. Sana booda sarichi isaan nyaachuu ykn ciniinuu erga amanee booda abbaan manaa haadha manaa ani garmalee jaaladhu, isayyuu kan dhiyeenya fuudhe Sarichi nyaachuu hin qabu jedhee, nyaatu ana haa nyaatu jedhee ishee ol-baadhate (oli fuudhe). Sarichi dutee, lafa dhiphisee dadhabee biraa deeme. Erga Sarichi deemee, ishee lafa kaa’e. Inni olii isheef ooleef, kan lubbuu ishee saree jalaa baraareef, yaa jaalallee koo sijaaladha jettee waan isheen isa dhungattu itti fakkaatee eegaa ture. Isheen immoo na hiiki ani ammuma warrakoof deebi’ee gala jetteen. Inni baay’ee rifatee maal maal taate? jedheen. Lakki kuni raajii dha, waan argee hin beekne arge. Ani biyya kootti gaafa sareen nama nyaachuuf jettu ulee ykn dhagaa oli fuudhaanii ittiin rukutu, ati garuu Ana oli fuutee ittiin rukutuuf turte; sarichatu deeme malee ittiin jette. Amma dubbii isaaniikanaaf jarsummaatu taa’ee jira jedhama. Akkamiin dubbii kana ilaalu laata?
← NUNDHOWWIIN ABDAARII!!-Sabboontuu Aggaarootiin
GOOTA KAMTU GAABBE?—Bakkasaa Tumsaa →